PAM: Manampy amin’ny fitantanana sy fitsinjarana ny “vatsy firaisankinan’ny orinasa” - ewa.mg
News - PAM: Manampy amin’ny fitantanana sy fitsinjarana ny “vatsy firaisankinan’ny orinasa”
Cet article PAM: Manampy amin’ny fitantanana sy fitsinjarana ny “vatsy firaisankinan’ny orinasa” est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article PAM: Manampy amin’ny fitantanana sy fitsinjarana ny “vatsy firaisankinan’ny orinasa” a été récupéré chez Délire Madagascar.
Mitohy ny fanomanana ny fanadinam-panjakana BEPC hotanterahina, amin’ny 21 ka hatramin’ny 24 septambra ho avy izao, manerana ny Nosy. Foibem-paritry ny fanabeazam-pirenena (Dren) dimy ambin’ ny folo amin’ireo roa amby roapolo no efa naharay ny laza adina, hatramin’ny omaly, araka ny tatitra avy ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Anisan’izany ny faritra Analamanga, Sofia, Vakinankaratra, Atsimo Andrefana, Bongolava, Atsinanana, Diana, Analanjirofo, Ihorombe, Menabe, Boeny, Betsiboka, Alaotra Mangoro, Amoron’i Mania ary Vatovavy Fitovinany. Navantana avy hatrany eny anivon’ny Zandarimariam-pirenena sy ny Polisim-pirenena ireo laza adina ireo mialoha ny hizarana azy eny anivon’ny foibem-panadinana tsirairay, mba hahazoana antoka amin’ny fiarovana azy. Tsiahivina fa iraisana ny laza adina manerana ny Nosy ho an’ny BEPC, amin’ity taona ity L’article Fanadinam-panjakana :: Naharay ny laza adina BEPC ireo Dren dimy ambin’ny folo est apparu en premier sur AoRaha.
Tontosa antsakany sy andavany ny fitsidihana apostolika nataon’i Papa Frasoa mpiandry ondry ao amin’ny eglizy katolika sady filoham-panjakana ao Vatikana teto Madagasikara. Nandritra ny nivanihanany dia namafy fiadanana sy fanantenana izy. Nandao an’i Madagasikara androany Talata 10 Septambra 2019 ny Papa ray masina Fransoa. Fiaramanidin’ny air Madagascar no nitondra azy sy ny delegasiona nentiny any Italia. Naneho mivantana ny hafaliana sy ny fahafaliam-pony ny Papa tamin’ireo evekan’i Madagasikara. Gaga izy tamin’ny hafanam-pontsika sy ny firaisankina ary ny fahaizantsika mandray vahiny. Noho izany dia nisaotra izay rehetra nahatontosa ka nahandro nahamasaka izao fitsidihana nataon’ny Papa izao ireo eveka eto Madagasikara, anisan’izany ny mpitondra fanjakana. Eo ihany koa ny fanehoana ny fihavanana malagasy, ny fahaizana mandray vahiny, ny fiombonan-po tamin’ny fitsidihan’ny papa. Marihana fa tonga nanatitra ny Papa Fransoa teny Ivato ny mpitondra fanjakana malagasy izay notarihan’ny Prezidàn’ny repoblika Rajoelina Andry sy ny vadiny, ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta sy ny minisitra vitsivitsy, ny filohan’ny antenimierandoholona… Nirina R. Cet article PAPA FRANSOA : Faly tamin’ny fitsidihana nataony teto Madagasikara est apparu en premier sur déliremadagascar.
Vono olona tany Antanifotsy :: Tazonin’ny zandary ireo miaramila efatra ambin’ny folo
Fantatra fa miaramila miisa enina amby roapolo no efa nataon’ny zandary famotorana momba ny raharaha vono olona nahafatesana lehilahy telo, hita faty tao anaty rano, tany Ampitatafika Antanifotsy, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Notazonina atao andrimaso ny efatra ambin’ny folo amin’izy ireo satria ahiana mafy ho tafiditra tamin’iny raharaha iny. Voatazona eny amin’ny zandary ao Ankadilalana izy ireo, araka ny fanazavana voaray avy amin’ny mpanao famotorana. Hatolotra ny Fampanoavana, anio na rahampitso, ny valin’ny fanadihadiana. Notohizana etsy Ankadilalana ny famotorana momba an’iny raharaha vono olona tany Antanifotsy iny. Nampanantsoina ireo miaramila rehetra voarohirohy. Nandefasana zandary manao fanadihadiana kosa any Ambohimahasoa, toerana misy ny fianakavian’ireo namoy ny ainy. Ho fantatra tsy ho ela ny zava-nisy marina sy ny nihatra tamin’ireo lehilahy telo namoy ny ainy. Iretsy farany izay fantatra fa voasambotry ny miaramila tany Ambohimahasoa, ny tapaky ny volana mey. Hita faty nifatotra tongotra aman-tanana tao anaty rano manamorona ny lalam-pirenena fahafito izy ireo, ny zoma lasa teo. Nitory an’ireo mpitandro filaminana tompon’antoka tamin’ny famonoana ny havan’ny maty. Milaza ny avy amin’ny Tafika malagasy fa: «efa eo anatrehan’ny zandary ny fanadihadiana rehetra. Andrasana ny tohiny». L’article Vono olona tany Antanifotsy :: Tazonin’ny zandary ireo miaramila efatra ambin’ny folo est apparu en premier sur AoRaha.
Fampitiavana kolontsaina: tsy mahafoy minitra iray ho an-janany ny ray aman-dreny
Mora taitran-drandram-bao ny ankizy sy ny tanora ankehitriny. Misy antony ny nahatonga izany. Iray amin’ireny, tsy nahavita ny adidiny sy niala ny andraikiny ny ray aman-dreny. Nialokaloka hatrany tao ambanin’ny: “sarotra ny fiainana” ny ray aman-dreny sasany, hany ka tsy vitany na ny niteny tamin-janany hoe: “aza mihaino an’izany”, na “aza mijery an’io”, na ny manoro amin’ny teny indraim-bava hoe: “tahaka izao ny fombantsika”! Na inona na inona fahasahiranana, ny maha izy ny tena, tsy tokony hatao ambanin-javatra. Iray amin’ireny ny kolontsaina.Io andraikitra tsy tanteraky ny ray aman-dreny niteraka io no anisan’ny mahatonga ny taranaka malagasy ho very fototra. Hiantehitra amin’ny hafa hatrany fa tsy mba tafajoro amin’ny toerana tokony hisy azy. Na dradraina etsy sy eroa aza fa “mila miverina an-doharano ny Malagasy”, ray aman-dreny mihitsy no tsy mampahafantatra ny taranany ny fisian’ilay “loharano”. Tsy ho tongatonga ho azy anefa izany raha tsy manao ezaka ny tsirairay.… Ireo firenena mahafantatra sy manana ny fototra ijoroany no tafiditra ao anatin’ireo ambara fa matanjaka sy mandroso indrindra maneran-tany. Tsy mba mangetaheta izany ve ny Malagasy?HaRy RazafindrakotoL’article Fampitiavana kolontsaina: tsy mahafoy minitra iray ho an-janany ny ray aman-dreny a été récupéré chez Newsmada.